Ogaden News Agency (ONA) – kulan lagu xusayo Maalinta Xuska Xasuuqa Ogadeniya oo lagu Qabtay Manchester, UK
kulan lagu xusayo Maalinta Xuska Xasuuqa Ogadeniya oo lagu Qabtay Manchester, UK
Posted by ONA Admin	/ February 19, 2012
Ururka Dhalinta Somalida Ogadeniya ee magalada Manchester ayaa soo abaabulay kulan xoog badan oo lagu xusayo Maalinta Xasuuqa Ogadeniya ee Febraayo. Kulankan ayaa waxa lagu qabtay Madaasha Shirarka ee Xafiiska Jaaliyada Ogaden Greater Manchester.
Waxaa kulankan Furay Gudoomiyaha Jaaliyada Halgame Maxamed Cali oo ka sheekeeyay Taariikhda Halganka Somalida Ogadeniya iyo Xasuuqa Joogtada ah ee loo kala aabo yeelin waayeel, caruur iyo haween toona isaga oo ku tilmaamay cadowtinimada guumeysiga Ethiopia mid aan horey caalamka looga arag wax lamid ah oo sidaas cawaan u ah.
Waxaa kale oo madasha kulankan si xoogan ugasoo qeybgalay haweenka Somalida Ogadeniya ee magaalada Manchester oo Gudomiyaha haweenka halkaas kasoo jeedisay hadalo guubaabo ah oo ay kaga warbixinayso sidii looga gudbi lahaa xasuuqaas looguna guntan lahaa xoreynta dhulka iyo dadka somalida Ogadeniya.
Dhalinta OYSU manchester ayaa waxa kulankan ku wehelinayay Gudomiyaha OYSU ee wadanka UK Halgame Salaad oo halkaas kasoo jeediyay ujeedada ay dhalinta Somalida Ogadeniya ay 18 Febraayo xuskan u qabteen waxa uuna xog kooban ka bixiyay sanadkii 1994 xasuuqi loo geystay shacabka Ogadeniya.
Shirkan ayaa xubno badna ay ka hadleen oo ka tirsan jaaliyada Somalida Ogadeniya ee Manchester. Waxaana ugu danbeyntii kulankan lagasoo saaray canbaareyn iyo sidii loo dacweyn lahaa Gumeysiga Ethiopia iyada oo lamarayo jaran jaroyinka qaanuunka Caalamiga ah.